C/wali Gaas oo ku soo biiray Masharaxiinta | Gedoonline
C/wali Gaas oo ku soo biiray Masharaxiinta	Added by Editor on August 7, 2012.Saved under Latest News	MUQDISHO(GMN)-Cabdiwali Maxamed Cali Gaas Ra’isulwasaaraha Soomaaliya ayaa maanta Magaaladda Muqdisho ku qabtay xaflad uu ku shaacinayo inuu u taagan yahay xilka Madaxweynaha Dalka Soomaaliya.
Cabdiwali Maxamed Cali ayaa ku wehliya xaflada xubno ka tirsan golaha wasiiradda ee qaar ka mid ahaa xildhibaanadii la kala diray.
Masuuliyiin ka socotay maamul gobboleedka Dalka ayaa sidoo kale goob joog ka ahaa xaflada uu Gaas ku soo bandhigayey Musharaxnimadiisa.
Ra’isulwasaare Cabdiwali Gaas ayaa Xaflada ka yiri “Waxa aan ahay Musharax Madaxwayne”
Taageeriyaasha Gaas ayaa marka uu hadalkaasi ku dhawaqay ku taageeray sacab ay barbarsocday geeraaro.
Inta ay xafladu socotay ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay filim ducomintry ah oo ka tarjumaya wax qabadka xukuumadda Ra’isulwasaare Gaas.
Gaas :Haweenka 30% ayay ku leeyihiin Dowladda cusub
Xaflad lagu taageerayo Raysul wasaare C/wali Max’ed Gaas oo ka dhacday Columbus +Sawiro
Raysul Wasaare C/wali Gaas “Dastuurka lagama soo horjeesan karo”
Odayaasha dhaqan Q.M iyo Gaas oo Kulmay